Jwxo-shiil: Khaa,iinkii Gadhka iyo Gafuurka Cadaa, Sideedtan ku gaadhyey Gaalnimo – Rasaasa News
Haduu durdur iyo dabaal galo doofaar waligii ma daahirsamo, Jwxo-shiil, munaafaqnimadiisa iyo waxa uu yahay awal hore waxaa ogaa ummada Ogadeeniya, habeenkii xalay ahaana waxaa ogaaday ummada Somaliyeed.
Siddii aanu hore idiinku sheegnay, waxaa habeenkii xalay ahaa uu TV Universal ee ku hadla afka Somaligu waraysi ka qaadeen khaatumo xume Jwxo-shiil, Jwxo-shiil, oo ay doqonimadii lagu xaman jiray ay ku dhabowday ayaa iska soo horfadhiistay TV aduunka oo dhan laga fiirsanayo. Ma jirin wax qorshe ah oo uu la yimid TV, wuxuuna moodayey in TV-ga ay lee yihiin Jwxo-shiilo [qabiil ku jabhad].
Hadaba maxaa ka raacay; Waxaa lagu cadeeyey wixii uu ahaa oo dhan, waxaana uu kala garan waayey wax alaale wax uu ku hadlo, waxaana ku cadaatay dunuubtii uu galay.
Ummada Somaliyeed oo badan oo aan maanta kula kulmay meelaha la isugu yimaado ee Moolka weyn ee Minneapolis, ayaa waxay isweydiinayeen hadii ninkani uu waxaas oo dambi ah galay, oo sidaas loo neceb yahay maxaa nalooga qarinayey ” Areey maskiinaan mudaayeey mugii muqdisho lagu qabtay ee miniyaann marin lahayn, munaafaq waaye” wiil abgaal ayaa sidaas yidhi.
Ummada Somaliyeed meel ay joogtaba waxay garwaaqsadeen Jwxo-shiil iyo sida uu u gumaaday geesiyaasha Ogadeen ee halganka gadhwadeenka ka ahaa, waxaan hubaa Jwxo-shiil, oo labo bilood isbitaal ku jiray dhibna ku yimid TV-ga in ayna suurto gal u noqon doonin uu dib oo dambe guriga uga soo baxo.
Xog aanu ka helay TV-ga Universal ayaa cadaynaya in Jwxo-shiil, uu Telephone u soo diray oo uu ku yidhi waa i khasaariseen, waad i shirqoosheen sidaas lacag kuma bixinin, wuxuu ku dhaartay in uusan waligii oo dambe la hadli doonin TV-ga iyo cid ka socotaba, waaba hadii uu noolaado Jwxo-shiil.
Bogga Hanqadh.com ee beesha cukur ku abtirsada, waxaa uu qoray in xalay dadkii su,aalaha weydiiyey Jwxo-shiil ay Woyyane ahaayeen, waa arimaha lagu yaqaan Jwxo-shiil ee ayna dhagahooda iyo indhahoodu wada shaqayn caqli xumadana garan la dhaqankii wada tashigii uu dadku lahaa wax la carar mooyee. Bal u fiirsada dadka ay ku sheegeen Woyaane, Marwada Dr.Dola, xubnaha Jaaliyaadka, xubnaha Jabhada, haweenka.
Bogga Roda Af Jano ee Qorhey.co muxuu qoray, waxaan jirin oo male awaal ah, iyo koobi meel u yaal oo qoray Mr Qaaxo [copy and paste], wuxuu yidhi si wanaagsan ayuu u dhacay waraysigu oo farxad leh.
Horay baanu idiinku sheegnay dadka Jwxo-shiil, daba socda iyo beenta bogga ku dhiiri galiya, way dhago la,a yihiin, waxayna ku xidhan yihiin qolal, mana jiraan wax ay aduun ka ogg yihiin. Waxaana markhaati idiinku filan arimaha waxa kama jiraanka ah ee ay qorayaan, kuwaas oo uusan dadweyuhu dhawrinba, waa war la qabo xiiso ma leh.
Waxaa aad suuqyada uga calaacalay, halgan bi,isyadii khaa,iinimada ku daba socday Jwxo-shiil, waxayna af lagaado u gaysanayaan shaqaalaha TV-ga caalamiga ah ee Universal, hore ayey ideecada bbc-da u af lagaadeeyeen dabadeedna looga mamnuucay, haatana waxaa laga mamnuucayaa TV-ga Universal.
rasaas baa runtasheegee rafiqaaga ka yeelo